घर / बाथरूमको नल / सेन्टरसेट बाथरूमको नलहरू / WOWOW सेन्टरसेट बाथरूमको नल पप-अप ड्रेन असेंबलीको साथ
पप-अप ड्रेन असेंबलीका साथ वाह वाह सेन्टरसेट बाथरूम नल
रेटेड 4.855बाहिर आधारित 26 मूल्यांकन ग्राहक
Centreset बाथरूम नल विवरण:
--केन्द्र स्थान कोष्ठक
ADA अनुरूप लीभर प्रयोगको सहजताको लागि ह्यान्डल गर्दछ
लिफ्ट पोल समावेश छ
2321400 स्थापना निर्देशन
पात्र सिंक २2320400२०XNUMX०० को लागि बाथरूमको नलले स्थिर समस्याहरू उत्पन्न गर्दैन।
एक समाप्त संग इलेक्ट्रोप्लेट, पोत सिंक को लागी बाथरूम नल कहिल्यै ऑक्सीकरण छैन।
अपग्रेड गरिएको पुश र सिल पप-अप ड्रेन भेला र सीयूपीसी लाइसेन्स पाएको नल वितरण नलीहरू समावेश गर्दछ।
उच्च चाप टाउकोले सिंकमा अधिक निकासी र अधिक पहुँच प्रदान गर्दछ।
--होल कोष्ठक साधारण स्थापनाको लागि-इन्च केन्द्रित लेआउटको साथ। प्वाल आकार: -3०--4 मिमी; अधिकतम डेक मोटाई: mm० मिमी।
दुई प्रवाहित साधारण प्रवाह र तापमान नियन्त्रणकर्ताको लागि।
प्रीमियम सामग्री निर्माण टिकाऊ र भरपर्दो को लागी निकल समाप्त ब्रश।
SKU: १2321400००।। विभाग: बाथरूमको नल, सेन्टरसेट बाथरूमको नलहरू टैग: २ ह्यान्डल,4इन्चको, ब्रश निकल
12.17 x 8.78 x 3.07 इन्च
१ Hand ह्यान्डलहरू
डेक माउन्ट गरियो
चिसो / तातो पानी
बाथरूम नल / पप अप नाली
पहिलो, म 80० बर्षको छु र प्लम्बर होइन। प्रोजेक्टको सबैभन्दा गाह्रो अंशले पुरानो faucets हटाइरहेको थियो। नयाँ वाह faucets महान गुणवत्ता, उत्कृष्ट मूल्य, धेरै आकर्षक हो, र काम को लागी आवश्यक सबैकुरा समावेश गरीएको छ जसले DIY को लागि काम धेरै सजिलो बनाउँदछ। म अत्यधिक यो उत्पादन सिफारिस गर्दछु।
यो मूल्य बिन्दुको लागि ठूलो देखिन्छ। म चाहान्छु कि ब्रान्ड नाम देखिएन, तर यो ज्यादै ठूलो कुरा होईन। ब्रश गरिएको निकले मसँग भएको अरू ब्रश निकल सामानहरूसँग मेल खान्छ। स्थापना सरल थियो र सबै भागहरू समावेश थिए।
एकदम सीधा स्थापना। ह्यान्डलहरू धेरै सहज रूपमा सार्दछन्, राम्रो देखिन्छन्। नलमा उच्च चापका कारण अतिरिक्त क्लियरेन्स, सिink्कमा (हात धुने कपडा, रिन्सि tooth टूथब्रश, आदि) मा काम गर्न अलि बढी कोठाको लागि अनुमति दिईएको डब्लू / ओ नलमा बम्पिंग; यसको मतलब कम चीजहरू सम्पर्कमा आउँदछन् जहाँ पानी बाहिर आउँदछ, त्यसैले सफा आउटपुट।
मैले केहि घर सुधार स्टोरहरूमा नलमा धेरै परिक्षण गरें र मैले भन्नै पर्छ यो नल एकदम महँगो भन्दा राम्रो बनाइएको देखिन्छ। म चकित भएँ। यो धेरै गह्रौं छ र भल्भहरू सजिलैसँग खुल्छन् र राम्रो अनुभवको साथ बन्द हुन्छ। म अहिले सम्म प्रभावित छु। निकट भविष्यमा म यी केहि बढी सेटहरू खरीद गर्दैछु।
ffordable, स्टाइलिश, राम्रो बनाएको नल। स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो र निर्देशनहरू भए पनि तपाईंलाई आवश्यक भएमा। म मेरो घरमा अन्य बाथरूम faucets प्रतिस्थापन गर्न अधिक अर्डर गर्न तयार छु। निश्चित रूपमा मूल्य लायक। महँगो नल जस्तो देखिन्छ तर धेरै सस्तो तर तिनीहरूले नल निर्माण बलिदान गरेनन्।
Z *** ई2020-05-24
नल महान देखिन्छ। म मेरो दोस्रो बाथरूमको लागि दोस्रो अर्डर गर्नेछु। मैले भनें, मलाई नल मन पर्छ र अब नयाँ नालीको साथ, म खुशीको साथ यस उत्पादनलाई पाँच तारा दिन्छु।
पूनरावलोकनहरू र ब्रान्डहरू तुलना गरेपछि हामीले हाम्रो पुरानोलाई बदल्नको लागि यो बाथरूम पहलू खरीद गर्‍यौं। यो स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो र धेरै सरल डिजाइन सफा राख्नको लागि धेरै सजिलो थियो। हामीले ब्रश गरिएको चाँदीमा यो किनेका छौं यस पक्ष हाम्रो बाथरूममा राम्रो देखिन्छ।
हामीले भर्खरै एउटा घर खरीद्यौं र नल बदल्न आवश्यक पर्‍यो। मैले यो किनें र यो एक उत्तम फिट थियो। मलाई चाहिएको सबै चीज लिएर आयो। स्थापना गर्न सजिलो र धेरै पातलो देखिन्छ।
मलाई थाहा छैन अरू के भन्नुपर्छ ... तर मलाई यो नल मन पर्छ! यो समीक्षा यी मध्ये मेरो तेस्रो एकको लागि हो। मैले एक वर्ष पहिले १ लाई खरीद गरें र यो अझै ठोस र बलियो छ र त्यो घरमा बच्चाहरूसँग छ! यो यति राम्रोसँग समातियो कि मैले दोस्रो २ किनेको हो। म मास्टर बाथरूम सिink्कको लागि केहि फरक पाउन जाँदैछु, तर यो नलले मलाई धेरै राम्रो गर्यो, र यो महँगो देखिन्छ, त्यसैले मलाई लाग्यो कि यससँग टाँसौं! र म खुशी छु कि मैले गरे। यदि मसँग th थोर सि s्क छ भने, म फेरि यसलाई किन्न सक्छु!
द्रुत वितरण र इकाईहरूले पूर्ण रूपमा काम गरे। तिनीहरू २० बर्ष पुरानो एकल लीभर, प्लास्टिक faucets मा एक ठूलो अपग्रेड थिए। कुनै बन्द कुनै ड्रिपिंग संग शटफ धेरै फर्म हो। मूल्य को लागी, म देख्न छैन कि कसरी एक faucets खरीद हराउन सक्छ।
म यो बाथरूमको नलको खरीदबाट अत्यन्तै खुसी थिएँ। गुण उत्कृष्ट छ। यो स्थापना गर्न एकदम सजिलो थियो र यसले तपाईंले काम गर्नु पर्ने सबै भागहरू समावेश गर्‍यो। यो धेरै राम्रो देखिन्छ र मेरो बाथरूममा सबै अन्य ब्रश निकल फिक्स्चरसँग यति राम्रोसँग मेल खान्छ। मलाई कुनै शंका छैन कि यो नल धेरै वर्षसम्म रहनेछ।
छोटा र कार्यात्मक बाथरूम नल।
यो घमण्ड संग एकदम फिट
शाब्दिक रूपमा तपाईलाई तपाईका हातहरू र समायोज्य रिन्च चाहिन्छ। प्लम्बर पुट्टी र टेप कुनै पनि आवश्यक थिएन, कुनै लीक जे भए पनि। यो सुन्दर र राम्रो देखिन्छ।
राम्रो faucets, राम्रो लग। तातो / चिसोका लागि छुट्टै ह्यान्डलहरू चाहान्थे किनकि मलाई एक्लो ह्यान्डल चुहिने छैन भन्नेमा अनिश्चित थियो। यस तरीकाबाट मैले यो सुनिश्चित गर्न सक्छु कि दुबै पक्षहरू सही तरीकाले सुरक्षित थिए। (पाठ्यक्रम को पाइप टेप प्रयोग गरेर) सजिलो स्थापना। राम्रोसँग काम गर्दछ। ह्यान्डलहरू हावाको झैं बदल्छन्। मेरो सिink्क पूर्ण रूपमा फिट र ती सभ्य मूल्यका थिए। मैले दुई किनें।
पी *** एन2020-06-15
धेरै राम्रो हामीले दुई किन्नुभयो, प्रत्येक बाथरूमको लागि। धेरै राम्रो कडा हेर्दै। मलाई मनपर्दछ कि हाम्रो हामिडिफायर भर्नको लागि नल कत्ति माथि छ।
यो एक उत्कृष्ट मूल्य मा एक महान नल हो! यसले मेरो बुवालाई f० मिनेटमा २ नल गर्न लगायो। मैले हाम्रो पाहुना स्नानको लागि तेस्रो अर्डर गरें र अझै मेरो पतिले यसलाई बदल्न उत्सुकतासाथ पर्खिरहेको छु। हामीसँग अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन। मलाई पप अप ड्रेन मन पर्छ!
यी धेरै राम्रो देखिन्छन् र मूल्य राम्रो छ। म यी (total कुल) को साथ मेरो बाथरूममा सबै सिंक बाहिर परिवर्तन भयो। यो एकदम राम्रो देखिन्छ र स्थापना मेरो जस्तै मान्छे को लागी पहिलो पटक प्लम्बिंग काम गर्न को लागी सरल थियो। यो एक सभ्य डाटको साथ आउँछ जुन निकल पनि छ र होजको गुणस्तर पनि राम्रो छ।
यो नल उत्कृष्ट छ। यो राम्रोसँग बनेको छ, स्थापना गर्न सजिलो छ, र राम्रोसँग कार्य गर्दछ। पप-ड्रेन डिजाइन स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ पुरानो शैलीको नालीहरू भन्दा पनि। म घर भर को लागी केहि अधिक प्राप्त गर्न जाँदैछु।
स्थापना गर्न सजिलो। यो उत्कृष्ट देखिन्छ। केहि फेन्सी छैन तर यो आकर्षक देखिन्छ। प्रयोग गर्न सजिलो।
हाम्रो भाडाको घरको लागि यो नल किन्नुभयो र मेरो छोरोले यसलाई स्थापित गर्यो। उनले नल स्थापना कहिल्यै गरेनन् तर उनले यो धेरै सजिलो र छिटो पाए। र यो राम्रो देखिन्छ।
यी राम्रो faucets र साँच्चै राम्रो मूल्य हो। तीनिहरु पनि धेरै फेन्सी होइनन् तर वास्तवमा राम्रो मूल्य हो यदि तपाई आफ्नो बाथरूम अपग्रेड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने। स्थापना गर्न धेरै गाह्रो थिएन र राम्रो टिकाऊ देखिन्छ र वास्तवमै राम्रो काम गर्दछ
मैले यो सोच किनेको थिएँ जुन मैले भुक्तानी गरेको थिएँ, हाम्रो अतिरिक्त बाथरूमको लागि। मैले पैसा तिर्ने भन्दा बढी भयो। वास्तवमा यो मुख्य बाथरूमको लागि खरिद गरेको महँगो नाम ब्रान्ड इकाई जस्तो देखिन्छ र महसुस गर्दछ। धेरै खुसी फेरि किन्नेछ, क्वालिटीबाट जाँच्न लामो समयको लागि हुँदैन जबसम्म मलाई अरू केहि चाहिन्छ।
उचित मूल्यको बाबजुद, यो उत्पादनले मेरो आशालाई बढायो। यो स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ र काम गर्दछ र राम्रो देखिन्छ।
हामीले यी सबै बाथरूममा सबै faucets प्रतिस्थापन गरेका छौं। स्थापना गर्न सजिलो - हामीले हाम्रो स्थानीय हार्डवेयर स्टोरबाट खरीद गरेको पहिलोको भन्दा धेरै सजिलो! बाथरूमको नलको लागि पनि ठूलो उचाइ।
मेरो पतिले यी एकदम चाँडो स्थापित गर्नुभयो, सब भन्दा गाह्रो अंश पुरानो बन्द भइरहेको थियो। तिनीहरू राम्रा र भारी धातु हुन्, रंग उत्तम छ। ह्यान्डलहरू थोरै सानो हुन्छन्, तर नलको उचाइले यसको लागि बनाउँछ। यी सि faceकमा आफ्नो अनुहार धुन सक्षम हुनुको लागि उत्तम छन्। हामीले हाम्रो केटाहरूको बाथरूमको लागि एउटा किन्यौं, यसलाई यति धेरै प्रेम गरियो कि हामीले आफ्ना मालिकका लागि दुई किन्नुभयो।
एच *** डी2020-07-16
यो एक धेरै नै राम्रो गरीएको उत्पादन हो, म सँधै समीक्षा गर्दिन तर यो उत्पादन असाधारण थियो कि यसमा नलमा जाने नयाँ कडा नलीहरू थिए। यो अप्रत्याशित थियो र धेरै सराहना गरियो। यो स्थापना गर्न सजिलो थियो र चुहाउँदैन।